IT-KOKO - Page 8 of 17 - IT is not just about 101001011...
The nExT iPhone ??
By အိုင်တီကိုကို on Wednesday, September 12, 2012
The next iPhone? iPhone 5? The new iPhone? ဘယ်လိုဘဲခေါ်ခေါ် အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကိုတော့ ဒီနေ့ Apple က အားလုံးကို ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို features တွေပါလာမလဲဆိုတာတော့ အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြမှာပါ။ အွန်လိုင်းမှာ မှန်းချက်ပေးထားတာတွေ အမှန်ဖြစ်လာမလား၊ အခြားဘာတွေ ထူးထူးခြားခြား လုပ်အုံးမလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့။ ဒါကတော့ နိုင်ငံအလိုက် အချိန်စရင်းပါ။ ဒါကတော့ Live Blogs တွေပါ။ Link1 | Link2 | Link3 ဒါကတော့ Live video ကြည့်နိုင်မယ့် လင့်ပါ။ Link your browser does not support IFRAMEs
မအားတဲ့ကြားကနေ Pic & Me | Portfolio
By အိုင်တီကိုကို on Monday, September 10, 2012
ကျွန်တော်ဘားစားမှမရေးဖြစ်သလို ဘားမှလဲကောင်းကောင်းမလုပ်ဖြစ်ဘူး။ မအားဘူး။ မအားဘူးနဲ့ လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေ အများကြီးဖြစ်ဖြစ်လားတယ်။ မီးပူတိုက်တာကအစ အခန်းရှင်းတာ အားလုံး ဘားတစ်ခုမှ ကောင်းကောင်းမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒီနှစ်ထဲမှာ တော်တော်လေး အလုပ်ရှုပ်တယ်။ ကျောင်းမှာ ဟိုပွဲဝင်ပြိုင် ဒီပွဲဝင်ပြိုင်လုပ်နေလို့ ကျန်တာတွေ ဘားမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒါတစ်ခုတည်းကြောင့်လားဆိုတော့ ဘားမှမဆိုင်ဘူး။ လုပ်ချင်စိတ်မရှိလို့ မလုပ်ဖြစ်ဘူးလို့ဘဲထင်တယ်။ မအားလို့ အလုပ်ရှုပ်နေလို့ဆိုတာတွေက နာမည်တတ်ထားတာတွေလို့ထင်တာဘဲ။ အခုတော့ ကျောင်းပြီးပြီ။ ပြိုင်ပွဲတွေလည်းပြီးပြီဆိုတော့ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ ကျေင်းအားရက်တွေမှာ ပိုက်ဆံလေးဘာလေး ရအောင်လို့ အလုပ်ပေးလိုက်မိပါတယ်။ ကျောင်းစပိတ်ကတည်းက လုံးလုံး မနားရသေးဘူး။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံရရင်ပြီးရောဆိုပြီး အားတင်းပြီးလုပ်တာ အခုဆိုရင် ၇ရက်ကျော်သွားပြီ။ ဒီနေ့ကတော့ တော်တော်လေး ပင်ပန်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မနေ့တုန်းက စိတ်တော်တော်တိုခဲ့ရတယ်။ ခေါင်းမူးတာကလည်းအရမ်းဘဲဆိုတော့ အလုပ်မှာတော်တော် စိတ်ရှော့ထားပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အိမ်ပြန်တဲ့ အချိန်ရောက်လာတော့ လိုက်ပို့ပေးတဲ့ …
By အိုင်တီကိုကို on Saturday, August 11, 2012
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဝင်ထားခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုမှာ မမျော်လင့်ဘဲ ဆုတစ်ခုရလိုက်လို့ ပျော်ခဲ့ပါတယ်။ အမှတ်တရဖြစ်သွားအောင်လို့ ပိုစ့်တင်ပြီး ရေးလိုက်တာပါ။ ရတာတော့နည်းနည်းကြာနေပြီ။ အခုမှဘဲ တင်ဖို့အချိန်ရလို့ တင်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ ဆုက သေးသေးလေးပါ။ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ မဟုတ်တဲ့ နှစ်သိမ့်ဆုလိုမျိုးထင်ပါတယ်။ “Eureka Award” လို့ခေါ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံ Idea ဆုလို့ ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဘားမှမရတာထက်တော့ သာပါတယ်။ ကျောင်းမှာတော့ ဆရာတွေက အပြိုင်းအဆိုင်တင်ဖို့ photo တောင် ရိုက်လိုက်ရသေးတယ်။ ဆုပေးပွဲတုန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး စာမေးပွဲဖြေနေရလို့ ကျောင်းကို ပြန်ပြေးခဲ့ရလို့ စင်ပေါ်တော့ ဆု တတ်မယူလိုက်ရဘူး။ SLA Spatial Challenge ကြောင်းသိချင်ရင်တော့ အောက်က လင့်တွေမှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဆုရတဲ့ အသင်းတွေကတော့ …
By အိုင်တီကိုကို on Thursday, July 19, 2012
ကျွန်တော် သိသလောက်မှတ်သလောက်လေးနဲ့ SLA ကလုပ်တဲ့ Mobile and Web App ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဝင်ပြိုင်ထားပါတယ်။ Android App တစ်ခုရေးထားတာပါ။ ကျွန်တော် နဲ့အတူ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်ပါ တူတူလုပ်ပါတယ်။ Android App တင်မဟုတ်ပါဘူး။ Web-Services, website ပါရအောင်လုပ်ထားပါတယ်။ ရည်ရွယ်ထားတာကတော့ စလုံးက ဆေးခန်းတွေရဲ့ system ကိုပိုကောင်းအောင် upgrade လုပ်ထားတာပါ။ GIS ကို အဓိကသုံးထားပြီး လုပ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒါ အခုအကူအညီတောင်းချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို Vote လုပ်ပေးပြီး ပြိုင်ပွဲမှာ နုင်အောင် ကူညီပေးဖို့ MZ အဖွဲ့ဝင်တွေကို အကူအညီတောင်းချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အသင်းဟာ မြန်မာတွေဘဲဖွဲထားတာပါ။ မြန်မာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ရှင်ပြီးပြိုင်ရတာ မလွယ်လှပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အစွမ်းကုန် …
By အိုင်တီကိုကို on Monday, July 16, 2012
ကျွန်တော် စာမရေးတာတောင် တော်တော်ကြာသွားပြီဗျ။ ရေးစရာ များများစားစား မရှိလို့ပါ။ ကျွန်တော်လဲ အလုပ်တွေတော်တော်များနေတယ်။ ကျောင်းစာ၊ ကျောင်းကိစ္စ၊ အလုပ်၊ အပျော်အပါး၊ ဟိုပြိုင်ပွဲဝင်၊ ဒီပြိုင်ပွဲဝင်နဲ့ ရှုပ်နေတာဘဲ။ အွန်လိုင်းတော့ နေ့တိုင်းတတ်ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူနဲ့မှတော့ ကောင်းကောင်း စကားမပြောဖြစ်ဘူး။ လုပ်စရာရှိတာလုပ်တယ်၊ ဖတ်စရာရှိတာ ဖတ်တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ဘဲ အချိန်ကုန်သွားပြီး အိပ်တဲ့အချိန်ရောက်သွားတာဘဲ။ ဒီနေ့လဲ တနေကုန် သွားနေတာ အခုမှဘဲ အိမ်ပြန်ရောက်တော့တယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Ubuntu ထဲဝင်ပြီး commends တွေလိုက်စမ်းနေတယ်။ မသိတာတွေတော်တော်လေးကို များနေသေးတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိလာတယ်။ ငါဘာမှမဟုတ်သေးပါလား။ ဘားမှကောင်းကောင်း မတတ်သေးပါလားဆိုပြီး အမြဲတွေးမိတယ်။ Linux ကတော့ ဘားမှကို ကောင်းကောင်းမသိဘူး။ Program install လုပ်တတ်တယ်။ ဖိုင်တွေ ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းလုပ်တတ်တယ်။ Basic commends …
“So.cl” Microsoft’s New Social Search
By အိုင်တီကိုကို on Monday, May 21, 2012
ကျွန်တော် Social Search ပြိုင်ပွဲ ကို ဖတ်ပြီးကတည်းက Social Search ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကို အခြေခံ သဘောပေါက် နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ Google က သူ့ရဲ့ Search Engine ကို ပိုမို အားကောင်းလာစေဖို့ Social Network တစ်ခုကို လုပ်ချင်ခဲ့ တာကြာပါပြီ။ အခုနောက်ဆုံး Google+ ကို Facebook နဲ့ ပြိုင်ပြီး လုပ်ခဲ့တာဟာ Social Search ကို စတင် လုပ်ဖို့ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုး Keyword Search နဲ့ ဘာကွာလဲ သိချင်ရင် Google+ မှာ Sign in လုပ်ပြီး search လိုက်ရင် သိသာလာပါလိမ့်မယ်။ Social Search …
Just tired:-( but fun!
By အိုင်တီကိုကို on Saturday, May 19, 2012
I was super busy during these days because of my school projects and working part time job. Actually working part time job is not that busy as doing projects. That projects make me so stressful and lost in unknown fields which is Android programming. However i will never give up to do it, i realized …